Zimbabwe’s allowing the diaspora vote, pure PR says analyst - BizNews.com
17th April 2018 17th April 2018 by [email protected]
CAPE TOWN — No ironies in the very minister who announced the military take-over in Zimbabwe this week announcing incipient measures to allow the diaspora to vote in their elections later this year. Sibusiso Moyo, Zimbabwe’s foreign affairs minister, says they’re working on being able to allow the more than a quarter of the country’s citizens who live outside their borders to vote in upcoming general and president elections. The opposition Movement for Democratic Change will benefit hugely as most of the Zimbabweans who left are aligned to it – making the ruling Patriotic Party appear truly democratic. Yet Zimbabwe’s own seasoned analysts say it’s an empty PR gesture, given that the country’s electoral commission has neither technical resources nor the capacity. Which seems to be more consistent and make sense of the apparent schizophrenia being suffered by the military rulers – and far less ironic. Stranger things have happened in politics though… – Chris Bateman
By Vonnie Quinn, Mark Barton and Desmond Kumbuka
(Bloomberg) – Sibusiso Moyo, Zimbabwe’s foreign affairs minister, said the country is working on the logistics of allowing citizens who live outside the country to vote in general and presidential elections scheduled for this year.